トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ tafura nepachinko chitoro kusarudza panguva kuvhurazve
Pazuva rokutanga yokutsiva Xintai, nemashoko zviri haanawo, nokuti mashoko wehurumende hapana, kuna Neraiuchi kusarudza kuchikuva chinhu chakaoma. Xintai zuva rokutanga, hazvirevi kuti pabani kubva mangwanani, richava rakazaruka kubva apo mapurisa mvumo iri pasi. Nokuda kwechikonzero ichi, ari haana kubvisa hwomukova nguva, isu kazhinji nepachinko parlors une rotari. Uyezve, zvichienderana rotari nzira, tapota cherechedza kuti panewo nyaya kana raparadza iyo Xintai handizivi.
Xintai yokutsiva rokutanga zuva, nekuti hakuna nguva yakakwana kuverenga yose mbambo, siya chikamu uko kutarira, iwe ivaiwo chete ndechokuti pakatanga guvhu chipikiri. Chokwadi, kana kuunganidza mashoko kudaro mashoko Robo nzvimbo Seven, chinozunguzirwa kuna Horukon yokuvira uye ROM uyewo ngatitorei kufunga.
Zvisinei, kutarisa mbambo kuchinja, kuitira kukwezva vatengi, ndiro Xintai yokutsiva zuva rokutanga ndiyo yakanakisisa chipikiri inonaka.
sezvo Horukon yakatarwa uye chipikiri kuchinja kubva Xintai yakazarukira zuva rokutanga zvakanakisisa, pane kuenda katsika sungisa zuva roga roga. Zvechokwadi, izvozvo inobvawo pane muchitoro. Sezvo zuva rokutanga, vaenzi aunganidze Ndiregei, zvimwe zvitoro kuti kuburikidza muchisunungura zvishoma nezvishoma, panewo chitoro kubva pazuva rekutanga nekuti ndinoda kutanga mwoyo. Nzvimbo iyi ndiyo, zvinowanzoitwa inenge vhiki pakarepo mushure kuvhurwa nani kuramba cheki zuva nezuva.
nguva kuvhurazve zvakadaro, dzakadai yemapurisa chitoro, sezvo vaitarisira kuti vatengi vari vazhinji kuzara, zviri mberi pakati rokutanga rokuongorora uye vanonanga tafura kubva yapfuura zuva nokusimbisa mashoko anotarisa munhu akanaka akanga adzidza kusvika .